1. Kukhona nama-dessert amnandi okulula kakhulu ukuwenza, futhi angamamenyu aphezulu emhlabeni wonke kuyo yonke iminyaka. Ngoba inephunga elimnandi elihehayo Ukunambitheka okuthambile nokubushelelezi Ukufana nezinhlobo eziningi zezitsha eziseceleni Hlobisa kahle ngokokuthanda kwakho noma onakho ekhaya ngokuphelele. Futhi imenyu izingane ezingayenza Ngeza ubumnandi nobumnandi emaholidini noma phakathi nesonto ngemisebenzi elula. Kepha uzizwa ekhethekile Nendlela yokwenza ama-pancake Noma kuyimenyu elula Kepha nikeza izinkumbulo kuzo zonke izinhlangothi ezithinta nakanjani
2. Yazi i-pancake yemenyu ethandwayo, iPancake (Pancake) ibhekwa njengohlobo lwekhekhe noma isinkwa esiyisicaba. Kusetshenziswa izinto zokusetshenziswa ezenziwe ngofulawa oxutshwe nobisi, ibhotela, amaqanda, ushukela noma ngubani ongaphambuka kodwa angathanda Ngokuletha ufulawa gazinga ngamafutha noma ibhotela kuze kuphekwe Ngakho-ke igama elithi Pan linamathiselwe Ingabe umsuka wegama le-dessert, ama-pancake adliwe ashisa Njengesidlo sasekuseni Noma ukuhlobisa ngesiraphu Uju nezithelo Kanye noshokoledi Kungenziwa ngesitayela esisithandayo nomndeni.
3. Izithako zokwenza ama-pancake zaziwa njengezithako cishe lonke ikhishi elizoba nazo kuzo, cishe noma yikuphi ukuthenga okwengeziwe. • Ufulawa wekolweni • Ushukela • Usawoti • Impuphu yokubhaka • Amaqanda • Ukunambitheka kwe-Vanilla • Ibhotela
4. Wenza kanjani ama-pancake Imenyu emnandi futhi emnandi • Beka ufulawa kakolweni, ushukela, usawoti, impuphu yokubhaka, uthele endishini bese ugovuza zonke izithako ndawonye. • Hola iqanda uthele ubisi lwenkomo phansi, engeza ukunambitheka okuncane kwe-vanilla. Bese ugovuza yonke into ndawonye ize ifane. • Lapho ukugovuza kuqediwe. Ncibilikisa ibhotela emanzini. Beka eceleni ukufudumala, engeza ibhotela bese ugoqoza kuze kube kufana. Beka eceleni umzuzwana. • Faka ipani phezu komlilo ophakathi nendawo. Kuze kube yilapho ipani liqala ukushisa • Lapho ipani liqala ukushisa Faka ibhotela elincane.
5. • Ukuze wenze ubuhle bama-pancake, khetha ipani eliyisicaba • Bese ulinda ibhotela licibilike ngokuphelele • Qala uthele ingxube yepancake phezu kwepani. Isimo esithandwayo siyindilinga. Usayizi noma yini oyithandayo Noma ubani onepani angabeka ipani ngaphezulu bese engeza i-pancake batter. • Flip pancake around. Kuze kube yilapho ama-pancake eseba nsundu ngokukhanyayo, emuhle.
6. Esimweni sezulu esipholile, vele ube nama-pancake amnandi futhi amnandi bese uphuza itiye, ikhofi noma ukhokho oshisayo. Isiza ukudala isimo esilula Ukuze ufudumale futhi ube muhle Kanye nemenyu izingane ezingayigcoba njengoba zithanda Kanye namapuleti wokuhlobisa njengobuciko ngaphandle kokulinganiselwa Ukuthi kuyabanda Masingeze imfudumalo ngendlela elula yokwenza ama-pancake ukudala injabulo kumndeni wakho !!!